अस्ट्रेलियाले जित्यो तीन वान डेको सिरिज – Kakhara News
काठमाडौं, १७ मंसिर । भारतले अस्ट्रेलियाविरुद्धको तेस्रो तथा अन्तिम वान डे बुधबार १३ रनले जितेको छ । भारतको यस सान्त्वना जितसँगै तीन वान डेको सिरिज अस्ट्रेलियाको पक्षमा २–१ रह्यो । घरेलु टिमले यसअघिका दुई वान डे लगातार जितेको थियो ।
अन्तिम खेलमा भारतले पहिले ब्याटिङ गर्दै ५० ओभरमा पाँच विकेट गुमाएर ३ सय २ रन बनाएको थियो । एक समय १ सय ५२ रन बनाउँदा पाँच विकेट गुमाएको भारतका लागि हार्दिक पान्ड्या र रविन्द्र जडेजाले जितको आधार तयार पारे ।
उनीहरूले १ सय ५० रनको नटआउट साझेदारी गरे । त्यसमा पान्ड्याले ९२ रन बनाए भने जडेजाले ६६ रनको योगदान दिए । जवाफमा अस्ट्रेलियाले ४९.३ ओभरमा सबै विकेट गुमाएर २ सय ८९ रन मात्र बनाउन सक्यो ।
जिततर्फ अग्रसर देखिएको अस्ट्रेलियाले ७९ रनमा अन्तिम चार विकेट गुमाएको थियो । अस्ट्रेलियाली ब्याट्सम्यानमध्ये कप्तान एरोन फिन्चले ७५ रन बनाए भने ग्लेन म्याक्सवेलले ५९ रन जोडे । म्याक्सवेलको विकेटसँगै अस्ट्रेलिया हारतर्फ अग्रसर रह्यो ।
एनएसएलमा काठमाडौं र धनगढी भिड्दै
May 11, 2021 कखरा न्युज
इतिहासमा पहिलो पटक च्याम्पियन्स लिगको फाइनलमा सिटी
May 5, 2021 कखरा न्युज
May 4, 2021 कखरा न्युज
डबल म्युटेन्टको कोरोना !!! तपार्इको मास्क खोर्इ??
डियर सासुआमा तपाईं पनि मेरी आमाजस्तै बन्न सक्नु हुन्छ र?
कालिमाटीमा आजदेखि खुद्रा कारोबार बन्द
उपत्यकामा दुई साताका लागि निषेधाज्ञाको समय थपियो
टेकु अस्पतालमा पीसीआर परीक्षण स्थगित